Kaddib Bernardo Silva Man City oo lagu wado inay usbuuca soo socda la soo wareegto laacibkan… – Gool FM
Kaddib Bernardo Silva Man City oo lagu wado inay usbuuca soo socda la soo wareegto laacibkan…
Byare May 27, 2017
(Manchester) 27 Maajo 2017. Naadiga Man City ayaa shalay si rasmi ah ula soo wareegtay daafaca kooxda Monaco ee Bernardo Silva kaa oo ku soo biiri doona kooxda reer England kowda bisha July.
Kooxda ku ciyaarta Etihad Stadium ayaa sidoo kale qarka u saaran inay la soo wareegto goolhayaha kooxda Benfica ee Ederson.
Man City ayaa ka dhigi karta Ederson goolhayaha ugu qaalisan kubbada cagta sida ay fahansan tahay goal.
Ilo wareedyo ayaa u xaqiijiyay Goal in kooxda reer England ay kalsooni ku qabto inay wada hadalada soo afjari doonto marka ay Benfica axada soo socota la ciyaarto kooxda Vitoria Guimaraes Final-ka Taca de Portugal.
Warar ka imaanaya dalka Portugal ayaa tibaaxayay in Man City ay tahay inay goolhayaha 23-jirka ka bixiso adduun dhan 40-milyan oo euro taa oo u dhiganta 35-milyan oo euro, waana lacago ka sara mari doona qiimihii ay Juventus kula wareegtay goolhaye Buffon sanadkii 2001, 33-milyan oo bound.
Naadiga Benfica ayaa iyadu leh kaliya Boqolkiiba 50 xuquuqda goolhayaha sidaa darteed waxay ku dagaalameysaa sidii ay qiimo badan ugu heli lahayd.
Kane oo Kante iyo Hazard ku garaacay abaal marinta laacibka Sanadka ee Taageerayaasha
Gary Cahill oo qarka u fuulay inuu ku biiro Arsenal intii uusan ku soo biirin Chelsea...(Maxaa ka hor-istaagay?)